တိုက်ပွဲတိမ်းရှောင် နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာမှပြည်သူများ နေရပ်ပြန်ရာတွင် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တပ?? - Yangon Media Group
ဝိုင်းမော်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁ – ၂ဝ၁၁ခု နှစ်နောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ နန် ဆန်ယန်ကျေးရွာမှ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်ခဲ့ရသောပြည်သူများ ဇန်န ဝါရီ ၃ဝ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှ စတင်၍ နေရပ်ပြန်ရာတွင် ဌာန ဆိုင်ရာများနှင့် တပ်မတော်မှ ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ သောကြောင့် မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော် လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ နန်ဆန်ယန်ကျေး ရွာအပါအဝင် ကျေးရွာအတော်များ များ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ဒေသခံပြည် သူများလည်း နေရပ်စွန့်ခွာကာ တိမ်းရှောင်စခန်းအသီးသီးသို့ သွားရောက်ခိုလှုံခဲ့ကြရသည်။
ယခုအခါ အဆိုပါဒေသ၌ နယ် မြေ အေးချမ်းလာပြီဖြစ်သည့်အတွက် နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာသို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မည့် မြစ်ကြီး နားမြို့နယ် အောင်နန်ုးဃြ စခန်း မှ အိမ်ထောင်စု ၁ဝ စုမှ အမျိုးသား ၁၇ ဦး အမျိုးသမီးကိုးဦး၊ ဝိုင်းမော် မြို့နယ် မိုင်းနာုးဃြ စခန်းမှ အိမ် ထောင်စုငါးစုမှ အမျိုးသားရှစ်ဦး အမျိုးသမီးရှစ်ဦးတို့နှင့် ၄င်းတို့၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအား တပ် မတော်မှ မော်တော်ယာဉ်ကိုးစီး၊ ဌာနဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှု ယာဉ်ငါးစီး ဖြင့် စတင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါ နေရပ်ပြန်ပြောင်း ရွှေ့နေထိုင်မည့် စုစုပေါင်းအိမ် ထောင်စု ၁၅ စုအား မြောက်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုး မင်းသန်း၊ ပြည်နယ်သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်လှကေ သီမာ၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးဦးထွန်းထွန်း၊ ခေတ္တမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဒုရဲမှူးလေးမြင့်၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာသိန်းမြို့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက မော် တော်ယာဉ်များဖြင့် နန်ဆန်ယန် ကျေးရွာအထိ လိုက်လံပို့ဆောင်ကာ နေရာချထားပေးပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေး သည်။
နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာမှ တိမ်း ရှောင်ပြည်သူများ နေရပ်ပြန်နိုင် ရေးအတွက် ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက် မှ စတင်ကာ နယ်မြေလုံခြုံရေး တာဝန်ကျ တပ်မတော်သားများက ကျေးရွာအတွင်းရှိ နေအိမ်များ၊ စာသင်ကျောင်း၊ သာသနာရေးဆိုင် ရာအဆောက်အအုံများနှင့် ပတ် ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်အား သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ရေတွင်း ရေ ကန်များတွင် သန့်ရှင်းသောသောက် သုံးရေရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ပေး ခြင်း၊ မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့်အပြင် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက လည်း နေအိမ်များ၌ ပြန်လည် နေထိုင်နိုင်ခြင်း အခြေအနေရှိ၊မရှိ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာ ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သောက်သုံး ရေရရှိရေးစသည့် ကိစ္စရပ်များအ ပြင် လိုအပ်သည်များကို ဖြည့် ဆည်းပေးနိုင်ရန် စစ်ဆေးခဲ့သည်။
နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာသည် ယခင်က စားသောက်ဆိုင်တန်းများ၊ တည်းခိုခန်းများဖြင့် စည်ကားခဲ့ပြီး ဗန်းမော်-မြစ်ကြီးနားပြေးဆွဲသည့် ခရီးသည်တင် မော်တော်ယာဉ် များ ရပ်နားရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ကာ ရွှေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများရှိသည့် အတွက် စည်ကားဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည့် ကျေးရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မော်လမြိုင်-မုဒုံ လမ်းပိုင်းတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်၊ သုံးဦးသေဆုံး
'ဖေဖော်ဝါရီ သီချင်းလေးထဲမှာ ဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်သွားခဲ့သူ တစ်ယောက်ရဲ့ အကြော??
ကစားသမားသစ် အဖြစ် အင်နီယေစတာကို ဗစ်ဆဲလ်ကိုဘေးအသင်း မိတ်ဆက်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ပြာမှုန့်များ မှုတ်ထုတ်နေသည့် မီးတောင်ကြောင့် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ လက်မှုရွှေဆိုင်းများ ပြန်လည် ဝယ်ယူ အသုံအးပြုတော